တရက်ကို သီဟိုဠ်စေ့ ၄ စေ့စားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ
HomeKnowledgeတရက်ကို သီဟိုဠ်စေ့ ၄ စေ့စားရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ
သီဟိုဠ်စေ့ကို ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့် အရသာလေးကြောင့် လူသိများ ကြပါတယ်။ သီဟိုဠ်စေ့ကို နေ့စဉ်စားနေတဲ့အစားအစာတွေ ထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး စားတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ် အတွက် အာဟာရဓါတ် တွေက အံ့အားသင့်ရ လောက်အောင် ရလာမှာပါ။
9. အသားအရေ ကြည်လင်လာပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ကော့ပါးနဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေ အတွက် အကျိုးပြုပါတယ်။ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်က အသက်အရွယ် အိုမင်း ရင့်ရော်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကော့ပါးမှာ ပါဝင်တဲ့ အင်ဇိုင်းပ အသားအရေကို တင်းရင်းစေ ပါတယ်။
8. ဖျားနာမှုတွေ နည်းပါးလာပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ဇင့်ဓါတ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဇင့်ဓါတ်က ခန္ဓါကိုယ်ကို ကိုယ်ခံအားစနစ် အတွက် အရေးပါပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သီဟိုဠ်စေ့4စေ့ကို နေ့စဉ် စားပေးရင် ဖျားနာတာတွေ နည်းသွားမှာပါ။
7. အရိုးတွေ သန်မာလာ ပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် စားပေးတဲ့ အခါ နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ ကော့ပါးဓါတ် 30% နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ် 20 % ရရှိပါတယ်။ ကော့ပါးက အရိုးတွေသန်မာဖို့ အတွက် အားပေးပြီး မဂ္ဂနီဆီယမ်က ခန္ဓါကိုယ်ကို ကယ်လ်ဆီယမ်တွေ စုပ်ယူဖို့ ကူညီပေး ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရိုးပွရောဂါဖြစ်ဖို့ နည်းသွားမှာပါ။
6. မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ luteinနဲ့ zeaxanthin တွေက မျက်လုံး ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးပါပါတယ် ။ သီဟိုဠ်စေ့ကို နေ့စဉ် စားပေးတဲ့ အခါ မျက်ကြည်လွှာကို ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်တွေ ကနေ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေ ပါတယ်။
5. ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါကိုလည်း ပျောက်စေပါတယ်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့တဲ့ အခါ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားလာပြီး ခေါင်းကိုက်တာ၊ ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ နာကျင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ် မျှမျှ တတ ပါဝင်တဲ့ သီဟိုဌ်စေ့ကို ပုံမှန်စားပေးတဲ့အလာ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်တာ သက်သာသွားမှာပါ။
4. သွားကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာပါဝင်တဲ့ Anacardic အက်ဆစ်က သွားပိုးစားစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဝက်ခြံဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေး ပါတယ်။
3. စွမ်းအင်ပြည့်သလို ခံစားရစေ ပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာ သတ္ထုဓါတ်၊ ဗီတာမင် E,K,B6၊ ကော့ပါး၊ ဖော့စဖောရပ်၊ ဇင့်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သံဓါတ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်နေ့လုံး အားပြည့်သလို ခံစားနေရမှာပါ။
2. ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ရာမှာလည်း လွယ်ကူစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်ကို နေ့စဉ်စားတဲ့ အခါ ကိုယ်အလေးချိန် တက်သွားမယ်လို့ လူအများက ယုံကြည်ကြ ပါတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သီဟိုဠ်စေ့မှာ ပါဝင်တဲ့ အဆီက ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်လျော် ပါတယ်။ အဝလွန်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း နည်းသွားမှာပါ။
1. ဆံပင်တွေကို တောက်ပစေပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့မှာပါဝင်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်က ဆံပင်တွေကို တောက်ပစေတဲ့ အပြင် ဆံပင်ကျွတ်တာ ကိုလည်း သက်သာစေ ပါတယ်။ ဆံပင်ကိုလည်း ပျော့ပျောင်းစေ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီဟိုဠ်စေ့က မယ်လနင်လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြည်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ကိုလည်း အားပေးပါတယ်။
သီဟိုဠ်စေ့ကို တစ်နေ့ကို4စေ့ ကနေ5စေ့ အထိပဲ စားဖို့လိုတာပါ။ အဲဒီထက် ပိုစားရင် ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။